राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू नभएसम्म सरकार स्थिर बन्‍न सक्दैन : बाबुराम भट्टराई
November 9, 2021 N88LeaveaComment on राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू नभएसम्म सरकार स्थिर बन्‍न सक्दैन : बाबुराम भट्टराई
गोरखा । जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागू नभएसम्म देशमा स्थिर सरकार बन्न नसक्ने बताएका छन् । गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिकाको घैरुङमा मंगलबार आयोजित जनभेटघाट कार्यक्रममा डा भट्टराईले अहिलेको शासन प्रणालीले देशमा जति सरकार बने पनि स्थिर सरकार बन्न नसक्ने बताएका हुन् । ‘संविधानसभाबाट संविधान बनाए […]
३५ वर्षको उमेरपछि गर्भधारण जोखिमपूर्ण
November 9, 2021 N88LeaveaComment on ३५ वर्षको उमेरपछि गर्भधारण जोखिमपूर्ण
कुनै पनि महिलाको लागि गर्भधारण गर्ने सही समय हो २५ देखि ३५ वर्षको उमेर । कम जोखिममा गर्भधारण र सहज तरिकाले सुत्केरी गराउनका लागि महिलाहरुले समयमा नै विवाह र बच्चाको योजना बनाउनुपर्छ । तर पछिल्लो समयको व्यस्त जीवनशैली र बदलिँदो संस्कृतिका कारण महिलाहरु ढिला गरी विवाह गर्न चाहन्छन् । जसले गर्दा बाँझोपन वा अन्य अनुवांशिक […]
महिनावारी हुँदा प्रयोग हुने मेन्स्ट्रूअल कप, प्याड जस्तै ‘विश्वसनीय’ तर कसरी प्रयाेग गर्ने ? भिडियाे
November 9, 2021 N88LeaveaComment on महिनावारी हुँदा प्रयोग हुने मेन्स्ट्रूअल कप, प्याड जस्तै ‘विश्वसनीय’ तर कसरी प्रयाेग गर्ने ? भिडियाे
एजेन्सी । महिनावारीका बेला प्रयोग गरिने स्यानीटरी सामानहरूको पहिलोपटक बृहत् वैज्ञनिक समीक्षा गरेका अनुसन्धानकर्ताहरूले मेन्स्ट्रुअल कप पनि ट्याम्पून र प्याड जस्तै रगत नचुहिने भन्दै त्यसबारे महिलाहरू ढुक्क हुनसक्ने बताएका छन्। बीबीसीमा प्रकाशित रिपाेर्ट अनुसार महिनावारीका क्रममा हुने रक्तस्रावलाई मेन्स्ट्रुअल कपले सोस्ने भन्दा पनि जम्मा गर्ने गर्छ। मेन्स्ट्रुअल कप योनिमा राखिन्छ र पुन: प्रयोग पनि गर्न […]
मन्त्री झाँक्रीकाे ‘हुकुमी शासन’ रोकिन् उपभोक्ता समितिसँग हुने नयाँ खरिद सम्झैता
November 9, 2021 N88LeaveaComment on मन्त्री झाँक्रीकाे ‘हुकुमी शासन’ रोकिन् उपभोक्ता समितिसँग हुने नयाँ खरिद सम्झैता
काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामका लागि नयाँ सम्झौता गर्न रोक लगाएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत नियम विपरीत हुने काममा ढिलासुस्ती, लापरबाही मौलाएपछि मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिसँग खरिद समझौता गर्न रोक लगाएको हो । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले कात्तिक १४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सबै खरिद कार्यहरु तत्काल रोक्का […]
November 9, 2021 N88LeaveaComment on विश्वकै उत्कृष्ट ह्याण्डराइटिङ लेखेर नेपालको नाम विश्वसामु चिनाउन सफल प्रकृति मल्ल
काठमाडौ । सानै उमेरमा विश्वकै उत्कृष्ट ह्याण्डराइटिङबाट विश्व रेकर्ड राखेकी प्रकृति मल्लको बारेमा थाहा नपाउने कमै छन् । नेपालमा मात्र हैन विश्वभरी नै उनको चर्चा र उनको ह्याण्डराइटिङ भाईरल भएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा त झनै उनी उदाएकी छिन् । उनको सफलताको राज भने यसरी खुल्छ । नौ वर्षमै प्रकृति मल्ल कक्षा […]
‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ बन्द, जीतु नेपालले ‘फुलन्देकी आमा’माथि थाेपरे दाेष
November 9, 2021 N88LeaveaComment on ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ बन्द, जीतु नेपालले ‘फुलन्देकी आमा’माथि थाेपरे दाेष
हास्य कलाकार जीतु नेपालले होस्ट गरिरहेको टेलिभिजन शो ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’को प्रसारण सोमबारदेखि बन्द भएको छ । सोमबार अन्तिम शो प्रसारण भयो । अन्तिम शो प्रसारण हुनुभन्दा अगाडि मिडियासँग प्रस्तुत भएका जीतु केही भावुक देखिए । उनले यो शोमा सहभागी सम्पूर्ण टिम र अतिथिलाई धन्यवाद दिए । उसो त ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने […]
आठ प्रकारका विवाह शैलीः कस्तो छ हिन्दू संस्कार ?
November 9, 2021 N88LeaveaComment on आठ प्रकारका विवाह शैलीः कस्तो छ हिन्दू संस्कार ?
विवाहको प्रचलन प्राणीहरूमध्ये मानिसमा मात्रै छ । यो प्राचीन कालदेखि चलिआएको एउटा संस्कार हो । विश्वकै पहिलो लिखित ग्रन्थ मानिने ऋग्वेदमा सूर्य र सूर्याको प्रसङ्गमा विवाह संस्कारका सबै वैदिक मन्त्र उल्लेख गरिएका छन् । विवाह संस्कारसँग सम्बन्धित सबै क्रियाकलाप ऋग्वेदमा उल्लेख छन् । अर्थात् विवाहको चलन त्यस बेला पनि प्रचलित थियो । चार वेदमध्ये सबैभन्दा […]
निकै सहयोगी र सर्वप्रिय हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, तपाईको कुन ?
November 9, 2021 N88LeaveaComment on निकै सहयोगी र सर्वप्रिय हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, तपाईको कुन ?
काठमाडौँ । ज्योतिषशास्त्रको आधारमा राशिअनुसार व्यक्तिको शरीर, स्वभाव, रुचि, गुण, दोष, शुभ, अशुभ आदिबारे व्याख्या गरिएको हुन्छ। राशिअनुसार व्यक्तिको रुचि र दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने रङहरु फरक फरक हुने गर्दछ। मेष राशिलाई मन परेको रङ वृष राशिलाई मन नपर्न सक्छ अथवा राशिको अनुसार व्यक्तिको स्वभाव फरक हुन्छ। लालकिताव तथा अन्य ज्योतिषशास्त्रको किताबमा उल्लेख भए अनुसार […]
किशोरी ब’लात्कारमा फसे यी नेपाली अर्बपति
November 9, 2021 N88LeaveaComment on किशोरी ब’लात्कारमा फसे यी नेपाली अर्बपति
काठमाडौं । किशोरी ब’लात्कारको आ’रोपमा एकजना अर्बपति व्यवसायी प’क्राउ परेका छन् । कार्गो व्यवसायी मनोज अधिकारी प’क्राउ परेका हुन् । उनी कार्गो व्यवसायीहरुको आधिकारिक संगठन फ्रेट फरवार्डस् संघ (नेफा)का अध्यक्ष पनि हुन् । प्र’हरीका अनुसार उनलाई ठमेलबाट प’क्राउ गरिएको हो । महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीको टोलीले अधिकारीलाई प’क्राउ गरी पाँच दिन म्याद थप परेर अनुसन्धान […]
स्थायी शिक्षकको विज्ञापन कहिले खुल्छ ? यस्तो रहेछ आजसम्म नखुल्नुको कारण !
November 9, 2021 N88LeaveaComment on स्थायी शिक्षकको विज्ञापन कहिले खुल्छ ? यस्तो रहेछ आजसम्म नखुल्नुको कारण !
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले तिहारलगत्तै स्थायी शिक्षकको विज्ञापन खुलाउने तयारी गरेकाले अब छिटै विज्ञापन खुल्ने खबर आएको छ । तिहार लगत्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग छलफल गरी विज्ञापन खोल्ने तयारी रहेको आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्टाले हामीलाई यसअघि जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार तिहारलगत्तै मन्त्रीसँग एक पटक छलफल गरेपछि विज्ञापन […]